रक्सी खाएपछि नेपालीहरू किन अंग्रेजी बोल्छन्, वैज्ञानिक व्याख्या ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार २२:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । ‘जब रक्सी भित्र छिर्छ, नेपालीहरुको अंग्रेजी बाहिर आउँछ’ भन्ने भनाइ हामी सबैले सुनेका छौं। कतिपय अवस्थामा अलि-अलि अंग्रेजी बोल्न जानेको मान्छे नसामा धाराप्रवाह बोलेको सुनेका पनि छौं।हामी ठान्छौं, रक्सीको सुरमा अंग्रेजी बोल्ने वा बोल्न खोज्ने मान्छेले नाटक गरेका हुन्। के साँच्चै नाटक गरेका हुन्? वा, यसरी अंग्रेजी बोल्नुको पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण पनि छ?हामीले लामो समयदेखि ‘मिथ’ बनाउँदै आएको रक्सी र अंग्रेजी भाषाबीचको यो सम्बन्ध हालै एक वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। उक्त अनुसन्धानले भन्छ, ‘मान्छेले कुनै नयाँ भाषा सिकिरहेको छ भने सामान्य अवस्थामा भन्दा रक्सीको हल्का नसामा बढी धाराप्रवाह बोल्नसक्छ।’भनेपछि, सामाजिक जमघट वा बीच बाटैमा रक्सीले मातेर अंग्रेजी बोल्नेहरू सामान्य नै रहेछन्। उनीहरूले त्यसो गर्नुमा वैज्ञानिक आधार रहेछ।
मान्छेले कुनै पनि नयाँ काम तबसम्म गर्न सक्दैन, जबसम्म ऊ संकोच मान्छ। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार सीमित परिमाणमा खाएको रक्सीले मान्छेको संकोच कम गराउँछ। संकोच कम भएपछि नयाँ काम गर्दा मनमा उत्पन्न हुने हड्बडाहट र हिच्किचाहटलाई सजिलै जित्न सकिन्छ।
यो त मानसिक अवस्थाको कुरा भयो। यति मात्र कारणले फर्रर अंग्रेजी बोल्न सकिने होइन। यसमा रक्सीले मान्छेको शारीरिक अवस्थामा ल्याउने परिवर्तन पनि जिम्मेवार छ।
रक्सी र भाषासँग जोडिएको यो वैज्ञानिक निष्कर्ष बेलायती तथा डच अनुसन्धानकर्ताहरूको हो।
यसै साता ‘जर्नल अफ साइकोफर्माकोलोजी’ मा प्रकाशित शोधपत्रमा उनीहरूले रक्सी खाएको मान्छे कसरी र किन दोस्रो भाषा (मातृभाषाबाहेक अन्य) बोल्न सक्षम हुन्छ भनी वैज्ञानिक जवाफ दिएका छन्।
टाइम पत्रिकाका अनुसार यो अध्ययनमा नेदरल्यान्डस्थित म्यासत्रिहित विश्वविद्यालयका ५० जना जर्मनभाषी विद्यार्थी सामेल थिए। उनीहरू सबै बेलाबेला रक्सी पिउँथे। उक्त विश्वविद्यालयमा डच भाषामा पढाइ हुन्थ्यो। ती विद्यार्थी यही भाषा सिक्दै थिए र भर्खर-भर्खरै भाषा परीक्षा पास गरेका थिए।
कुराकानीको रेकर्ड सुन्दा भने रक्सी पिएर अन्तर्वार्ता दिएकाहरूको भाषा सुध्रिएको बुझिन्थ्यो। रेकर्ड सुनेर मूल्यांकन गर्न बसेकाले पनि यही निष्कर्ष निकाले।
उनीहरूका अनुसार रक्सी खाएकाहरूले बोलेको डचभाषा पानी पिउनेको भन्दा बढी धाराप्रवाह र शुद्ध थियो। शब्दको उच्चारण मातृभाषी रैथानेले झैं सही ढंगमा गरेका थिए। तर, व्याकरण प्रयोग, शब्द भण्डार र आफ्नो कुरा कति सशक्त ढंगले राख्न सक्छ भन्ने आधारमा दुवै समूह लगभग समान थिए।
यसबाट अनुसन्धानकर्ता के निष्कर्षमा पुगे भने, हल्का मदिरा सेवनले मान्छेको आत्मविश्वास बढाइदिँदो रहेछ। यस्तोमा कोही नयाँ भाषा सिकिरहेको छ भने ऊ बिनासंकोच शुद्धसँग बोल्न सक्दो रहेछ।
सन् १९७२ मा भएको यस्तै अध्ययनमा थोरै परिमाणको रक्सी सेवनले थाइभाषीहरूको अंग्रेजी उच्चारणमा सुधार देखिएको थियो।
‘यो अध्ययनले मान्छेको मानसिक अवस्था मापन गर्दैन, तर अलिकति रक्सी खाएपछि संकोच हट्ने र ऊ बिनाहिच्किचाहट नयाँ भाषा बोल्न सक्षम हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ टाइम पत्रिकाका अनुसार शोधपत्रमा अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन्, ‘यसले विदेशी भाषा बोल्न हच्किनेहरूमा भाषिक शुद्धताका साथै धाराप्रवाह बोल्ने क्षमता पनि विकास गराएको हामीले पाएका छौं।’
नेपाल सिमेन्टमा पनि आत्मनिर्भर
काठमाडाैं । नेपाल अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने सिमेन्टले मुलुकको माग धान्न सक्ने भएका कारण आयातमा…
मौसमभन्दा चिसो राज्य: शीतलशरका पीडितहरु कठ्यांग्रिँदै-मर्दै, शीतलहरले मृत्यु हुनुलाई अझै दैवीप्रकोप मानिंदै !
काठमाडौं । तराई–मधेसमा शीतलहरले मृत्यु हुनुलाई अझै दैवीप्रकोप मानिन्छ । मैदानी भागका…
जलवायु सम्मेलनको निष्कर्ष: जलवायु अनुकुलताको कार्यक्रममा जोड
सिन्धुपाल्चोक । जलवायु सम्मेलनका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा देखिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अब जलवायु अनुकुलताको…
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूमा एनजिओ र आइएनजिओहरूको प्रवेश शुरु भैसकेको छ । संविधानसभामा विदेशीहरूको इच्छाअनुसार काम भएको…
काठमाडौं । गुन्डा नाइके ‘निमा’ भनेर चिनिने राजेन्द्र लामा काठमाडौंको कोटेश्वरबाट पक्राउ परेका छन्।
अनेरास्ववियूका एक नेतालाई खुकुरी हानेको आरोपमा…
भत्ताकै लागि अनुगमनः उपभोक्ता ठगनेविरुद्ध कारबाही शून्य, ६ महिनाको अवधिमा उपलब्धिबिनै साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्च
काठमाडौं । छाडा बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्ला ६ महिनाको अवधिमा साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी…